Migraweb waaadeeg ay usoo kordhiyeen muhajiriinta dadka soo galeenka ah Migraweb waxay bixinayaan maclumaad iyo xidhiidh iyo muhuum uu ah nolol maalmeedka swetzeland. Waxaanu isku taxaluujinnaa kor uqaadista turjuminsta macluumaadka macluumaadka afka hooyo ee muhaajiriinta, oo luuqado kala duwan wiig walba.
Macluumaadkan waxa bixinaya ururo madax banaan oo kasocda bulshada rayidka ah ee Swithzeland, ama dawladda dhexe ama dawladda hoose xafiisyadooda.
Waxa dabadeed turjumaaya macaluumaadka dad sinji iyo luuqadba kala duwan, takhasusuna u leh luuqadooda hooyo iyo tafaransiiska iyo ta jarmalka. Kuwaasoo xidhiidhinaaya dhaqannada kala duwan si mutadawacnimo.
Ma haysaa waxa su’aal ah ama ma u baahantahay wax talo ah, makusoo wayahday dhibaato walwal, walbahaar iyo rabshad iyo dawakhaad iyo cidla ciirsila
Migraweb waxay gacanta gabanaysaa muhaajiriint ama qoxoontiga si luuqadahooda hooyo u fududayso si guudna y xaliyaan caqabadaha ka hor yimaada , iyo wax kasta oo kusoo fool yeesha.. waxa kaloo ka caawinasyaa dhex galka iyo laqabsiga, si aad u noqoto qof lo iftiimiyey daahan ka saarnayan waxa uu xaq u leeyahay.
Mutadawacnimo uga qayb gal
Soo dhawaw haddii aad tahay qof isxilqaamay oo turjumaan ah ama rabto inaad internka talo naga soo siiso luqadaha kasta oo aad ku hadasho.
Kaalmadaadu waxay kusiin dariiq aad kula wadaagto waayo aragnimada aad uleedahay nolsoha waddanka Swithzeland, dadka kale ee ka tirsan bulshadaad awaxaad markaa ka caawin kaertaa inay degaan waddanka.
Macluumaad intaa dheer la xidhiidh .
Migraweb waxay u furantahay luuqadaha bulshooyinka oo dhan. Haddii aad rabto inaad samayso koox turjumaano ah, ama inaad samayso koox turjumaano ama talo bixiyayaal online ah., si aad noo siiso maculuumaad iyo talo luuqad aan hore ujirin booqo, .